Family – စာမကျြနှာ3– Healthy Life Journal
ကျန်းမာတဲ့ အိမ်ထောင်မှုဘ၀ပိုင်ဆိုင်စေဖို့ဆိုရင် . .
၊ ကိုထက် ၊ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ လိင်မှုဘ၀(Sex)ကျန်းမာအဆင်ပြေမှ သာယာချမ်းမြေ့မှုကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာတဲ့လိင်မှုဘ၀ရရှိစေဖို့ရာအတွက် အိမ်ထောင်ရှင်တွေဟာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ချစ်မြတ်နိုးမှုရှိသင့် သလို သစ္စာတရားလည်းထားရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ အဆင်ပြေလိုသူတိုင်း သိထားသင့်သည့်အခြေခံအချက်များ အဆင်ပြေတဲ့ လိင်မှုဘ၀ဆိုတာ အိမ်ထောင်ရှင်စုံတွဲတွေကြားမှာ မတူကွဲပြားနေပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အိမ်ထောင်သည်တိုင်းမှာ...
ပိုင်ဆိုင်သမျှ ရောင်းချပြီး ကားထဲမှာ နေထိုင်ကာ ကလေးအသက်ကို ကယ်တင်
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ အသက် ၃၃ နှစ် အရွယ်တွေရှိကြပြီဖြစ်တဲ့ ဘန်ကာနဲ့မာဂရက်တို့ လင်မယားဟာ ကလေး ၃ယောက်ရှိပါတယ်။ တစ်နှစ် အရွယ် အငယ်ဆုံးသမီးလေး ရူဘီပါးလ်ကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်က ရေမြွှာရည်နိမ့်ကျတာကိုသာတွေ့ရှိရပေမယ့် မွေးဖွားလာချိန်မှာ ၄ ပေါင် ၁၀ အောင်စရှိတဲ့...
အချစ်ရဆုံးသမီးအတွက် ဖေဖေရဲ့ ပေးစာ . . .
ဇွန်ခိုင်ဦး ( ဆေးဝါးတက္ကသိုလ် ) အဖိုးအနဂ္ဃ ထိုက်တန်တဲ့ သမီးလေးရေ. . အခုပဲ သမီးမေမေနဲ့ ဖေဖေတို့ အင်တာနက် သုံးနေကြတယ်။ “ အမျိုးသား စိတ်ဝင်စားလာအောင် ဘယ်လိုဆွဲဆောင်ရမလဲ ”ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကိုဖတ်ရင်း ဖေဖေ စိတ်တိုမိတယ် သမီး.....
သမီးရှင်မိဘတို့အတွက် . . .(၂)
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ကျွန်တော်တို့ လူကြီးမိဘတွေ အကုန်လုံးက အစဉ်အလာအားဖြင့် ကလေးတွေဟာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးနဲ့ သိသွားရင် မဟုတ်တာတွေ လျှောက်လုပ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်၊ အဲဒီလို ထင်တဲ့အခါကျတော့ “ ဒါမကြည့်နဲ့၊ ဒါ မမေးနဲ့ . . ဒါ...
သင်တို့တစ်မိသားစုလုံး နာမကျန်းဖြစ်ခြင်း ကင်းဝေးစေဖို့ . .
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မိုးတွင်းရောက်တာနဲ့ နာမကျန်းမှုတွေ အဖြစ်များလာပါပြီ။ အဲဒီအတွက် သင့်အနေနဲ့ နာမကျန်းမှုမဖြစ်စေဖို့ အောက်ပါအမူအကျင့်တွေကို လိုက်နာပေးသင့်ပါတယ်။ (၁) လက်ကို မကြာခဏဆေးကြောပါ လက်တွေက ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပိုးမွှားတွေ အဓိကသယ်ဆောင်ရာဖြစ်တဲ့အတွက် လက်ကိုမကြာခဏဆေးကြောပါ။ အိမ်သာတက်ပြီးတိုင်း လက်ဆေးပါ။ (၂)...
သမီးရှင် မိဘတို့အတွက် (၁) . . .
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) သမီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ဖခင်တွေက သိပ်စိုးရိမ်ပါတယ်။ ဖခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သားတွေထက်ပိုပြီး သမီးကို ဘာကြောင့် ပိုပြီးစိုးရိမ်ရပါသလဲ၊ ဒါက အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေကြောင့် ပိုစိုးရိမ်နေမိတာလား။ အဲဒီအတွက် သမီးရှိတဲ့ ဖခင်တွေအတွက် နည်းပေးလမ်းပြ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးကို...
သာယာပျော်ရွှင်နွေးထွေးသော အိမ်ထောင်ရေးအတွက် သော့ချက်
၊ ကိုထက် ၊ ဇနီးရောခင်ပွန်းပါ အလုပ်လုပ်ပြီး ငွေရှာနေရတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်မှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးတွေ့ဆုံဖို့အချိန်တောင် မရှိသလောက်ရှားလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး ပိုမိုရင်းနှီးနွေးထွေးမှု ရရှိစေမယ့် နည်းလမ်းခြောက်သွယ်ကို အခုကစပြီး လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ – ချိုမြိန်သော အနမ်းပေးပါ နံနက်ခင်းနဲ့ ညနေခင်းတွေမှာ သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကို...
သားသားမီးမီး လိုချင်သူတို့ အမြန်ဆုံး ရရှိစေမည့် နည်းများ
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) တချို့ဇနီးမောင်နှံတွေမှာ ကိုယ်ဝန်ရဖို့ လွယ်ပေမယ့် တခြားသူတွေအတွက်တော့ ဆေးပညာ အကူအညီ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ မျိုးအောင်ပြီး သန္ဓေတည်နိုင်ဖို့ရာအတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ဘ၀နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံက အရေးပါတယ်လို့ သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်တွေက အကြံပြု ထားပါတယ်။ (၁)...
အိမ်ရှင်မတို့ အသုံးဝင်စေမည့် အလွယ်နည်းလမ်းများ
၊ လရိပ်မေ ၊ – သင့်ဆံပင် ပိုတောက်ပြောင်လာဖို့ ဆံပင်ထဲ ရှလကာရည် လက်ဖက်ရည် ဇွန်းတစ်ဇွန်းထည့်ပြီး ပွတ်သပ်ပေးပါ။ ပြီးမှ ခေါင်းလျှော်လိုက်ပါ။ – ကန်စွန်းဥအခွံနွှာရလွယ်စေဖို့ ကန်စွန်းဥ ပြုတ်ပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းရေအေးထဲ စိမ်လိုက်ပါ။ – နှလုံးရောဂါအမောဖောက်ခြင်း (Heart...
သင့်ဇနီး ကိုယ်ဝန်ယူဖို့ ကြိုးစားနေလျှင်
* သင့်ဇနီး နည်းတူ သင်လည်း ကောင်းမွန်မျှတတဲ့ အစားအသောက် စားပါ * ကိုယ်ဝန်မရရှိခင်(သန္ဓေမအောင်ခင်) စားတဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ အစားအသောက် ဟာ မွေးလာတဲ့ ကလေးငယ်ရဲ့ ကျန်းမာရေး အပေါ် ကြီးမားတဲ့ သက်ရောက်မှု ရှိနေပါတယ်။